Tu Tu Tha: စုတ်ချက်ဖြင့် အလှတရားဖန်ဆင်းသူ သို့မဟုတ် ...
Wednesday, October 22, 2008 | Labels: ကြွေလွင့်သူ |
This entry was posted on Wednesday, October 22, 2008 and is filed under ကြွေလွင့်သူ . You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leavearesponse, or trackback from your own site.
မသေသင့်တဲ့လူကသေ... သေသင့်တဲ့ကောင်တွေကျတော့ အသက် ၇၀၊ ၈၀ လောက်အထိ သူများဒုက္ခပေးကြတုန်း...။